Ulujonga njani uPhando lwakho lweOrganic (SEO) yokuSebenza | Martech Zone
Emva kokusebenzela ukuphucula ukusebenza kolwakhiwo lwalo lonke uhlobo lwesiza-ukusuka kwiziza ze-mega ezinezigidi zamaphepha, kwiindawo ze-ecommerce, kumashishini amancinci nasekhaya, kukho inkqubo endiyithathayo endinceda ukuba ndibeke iliso kwaye ndinike ingxelo ngokusebenza kwabaxumi bam. Phakathi kweefemu zentengiso yedijithali, andikholelwa ukuba indlela yam yokuzahlula yahlukile… kodwa ichaneke ngakumbi kunophando oluqhelekileyo lwezinto eziphilayo (seoarhente. Indlela yam ayinzima, kodwa isebenzisa uluhlu lwezixhobo kunye nohlalutyo olujolise kubo bonke abathengi.
Izixhobo ze-SEO zoPhononongo lokuSebenza ngokuSebenza ngokuKhangela
Ikhonsoli ye Khangela yeGoogle - cinga ngeGoogle Search Console (eyayisaziwa njengezixhobo zewebhu) njengeqonga lokuhlalutya ukukunceda ukuba ujonge ukubonakala kwakho kwiziphumo zophando lwezinto eziphilayo. I-Google Search Console iya kuchonga imiba kwindawo yakho kwaye ikuncede ujonge uluhlu lwakho kwinqanaba. Ndithe "ukuya kuthi ga" kuba uGoogle akaboneleli ngedatha ebanzi yokungena kubasebenzisi bakaGoogle. Kananjalo, ndifumene iimpazamo ezininzi ezingezizo kwikhonsoli ethi gqi ize inyamalale. Kananjalo, ezinye iimpazamo azichaphazeli ukusebenza kwakho. Imicimbi yokuKhangela kuGoogle yokukhangela inokuchitha ixesha ngetoni… ke lumka.
google Analytics I-Analytics iya kukubonelela ngedatha yokwenyani kwaye ungazicwangcisa ngokuthe ngqo iindwendwe zakho ngomthombo wokufumana esweni ukugcwala kwabantu. Ungaqhubeka nokuyaphula ibe ziindwendwe ezintsha nokubuyela. Njengakwi-console yokukhangela, i-analytics ayichazi idatha yabasebenzisi abangene kwiGoogle ke xa ususa idatha kumagama aphambili, imithombo yokudlulisela, njl. Ngabantu abaninzi abangene kwiGoogle, oku kunokukukhohlisa.
Ishishini likaGoogle -Iziphumo zokukhangela iphepha (IINKONZO) Zahlulahlulwe zangamacandelo amathathu ahlukeneyo amashishini endawo- iintengiso, ipakethe yemephu, kunye neziphumo zezinto eziphilayo. Ipakethi yemephu ilawulwa nguShishino lukaGoogle kwaye ixhomekeke kakhulu kubume bakho (uphononongo), ukuchaneka kwedatha yeshishini lakho, kunye nokuhamba rhoqo kwezithuba kunye nokuphononongwa. Ishishini lendawo, nokuba yindawo yokuthengisa okanye umboneleli wenkonzo, kufuneka alawule iphrofayili yabo yeShishini likaGoogle ngokuhlala ukuze abonakale.
Uhlalutyo lweSiteshi seYouTube -I-YouTube yeyona injini yesibini yokukhangela ngobukhulu kwaye akukho sizathu sokuba ungabikho apho. Kukho itoni iintlobo ezahlukeneyo zevidiyo ukuba ishishini lakho kufuneka lisebenze ukuqhuba ukugcwala kwezinto eziphilayo kwiividiyo kunye nokuhanjiswa kwetrafikhi ukusuka kwi-YouTute ukuya kwindawo yakho. Ungayichazanga eyokuba iividiyo ziya konyusa amava eendwendwe zakho kwiwebhusayithi yakho. Sizama ukuba nevidiyo efanelekileyo kwiphepha ngalinye lesiza seshishini ukuze sizenzele imali kwiindwendwe ezikuxabisayo ngokufunda itoni yolwazi kwiphepha okanye kwinqaku.
Semrush - Kukho ezimbalwa kakhulu ezinkulu Zixhobo ze SEO phaya kukhangelo lwendalo. Ndikhe ndasebenzisa iSemrush iminyaka, ke andizami ukukuphembelela kwenye yabanye phaya… Ndifuna nje ukuqiniseka ukuba uyaqonda ukuba okufuneka ubenazo ukufikelela kwezi zixhobo ukubeka esweni ukusebenza kwe-organic search yakho. Ukuba uvula isikhangeli kwaye uqalise ukujonga iphepha lesiphumo seinjini yokukhangela (IINKONZO) ufumana iziphumo ezenzelwe wena. Nokuba awungenanga kunye nefestile yabucala, indawo okuyo inokuba nefuthe ngqo kwiziphumo ozifumana kuGoogle. Le yimpazamo eqhelekileyo endiyibonayo xa abathengi bejonga indlela abasebenza ngayo… bangene ngemvume kwaye banembali yokukhangela eza kuthi inike iziphumo ezizezakho ezinokwahluka kakhulu kubakhenkethi abaqhelekileyo. Izixhobo ezinje zinokukunceda ekuchongeni amathuba okudibanisa ezinye iindlela ezinje yokuzonwabisa, okanye ukukhula oonomadudwane abatyebileyo kwindawo yakho ukuphucula ukubonakala kwakho.
Izinto eziNgaphandle eziChaphazela ukuHanjiswa kweNdalo
Ukugcina ukubonakala okuphezulu kwiziphumo zokukhangela kwimigaqo yokukhangela efanelekileyo kubalulekile kwishishini lakho 'kwimpumelelo yentengiso yedijithali. Kubalulekile ukugcina engqondweni ukuba i-SEO ayisiyiyo into eyakha yakho Zenziwe… Ayiyomprojekthi. Ngoba? Ngenxa yezinto eziguquguqukayo zangaphandle ezingaphandle kolawulo lwakho:
Kukho iisayithi ezikhuphisana nawe ngokuchasene nenqanaba leendaba, iirejista kunye nolunye ulwazi lwendawo. Ukuba banokuphumelela kukhangelo olufanelekileyo, oko kuthetha ukuba banokuhlawulisa ngokufikelela kubaphulaphuli babo-nokuba kukwintengiso, inkxaso-mali, okanye ukubekwa kwindawo ebonakalayo. Umzekelo omkhulu ngamaPhepha aMthubi. Iphepha elityheli lifuna ukuphumelela iziphumo ezinokufunyanwa kwindawo yakho ukuze unyanzelwe ukuba uzihlawule ukuze wandise ukubonakala kwakho.
Kukho amashishini akhuphisanayo nxamnye neshishini lakho. Banokutyala imali kakhulu kumxholo kunye ne-SEO ukuze benze imali kukhangelo olufanelekileyo okhuphisana nalo.
Kukho amava omsebenzisi, utshintsho lwealgorithmic simo, kunye novavanyo oluqhubekayo olwenzeka kwiinjini zokukhangela. UGoogle uhlala ezama ukuphucula amava abo abasebenzisi kunye nokuqinisekisa iziphumo ezisemgangathweni zokukhangela. Oko kuthetha ukuba unokuba nesiphumo sophando ngolunye usuku kwaye emva koko uqalise ukuphulukana nesilandelayo.
Kukho iindlela zokukhangela. Ukudityaniswa kwamagama aphambili kunokunyusa kunye nokuhla kokuthandwa ngokuhamba kwexesha kwaye amagama anokutshintsha ngokupheleleyo. Ukuba uyinkampani yokulungisa i-HVAC, umzekelo, uza kuphakama kwi-AC kwimozulu eshushu nakwimicimbi yomlilo kwimozulu ebandayo. Ngenxa yoko, njengoko uhlalutya ukugcwala kwenyanga-ngaphezulu kwenyanga, inani leendwendwe linokutshintsha ngokubonakalayo kwimeko.
Iarhente yakho ye-SEO okanye umcebisi kufuneka abambe kule datha kwaye ahlalutye ngokwenyani ukuba uyaphucula okanye awuziphuculi na ezi zinto zangaphandle ziphakamileyo zengqondo.
Ukubeka iliso amagama aphambili abalulekileyo
Ngaba ukhe wayifumana inqaku le-SEO apho abantu bathi bazokufumana kwiPhepha 1? Ugh… cima loo mihlaba kwaye ungabaniki ixesha losuku. Nabani na onokubeka kwinqanaba kwiphepha 1 kwikota eyahlukileyo… ayithathi mzamo. Eyona nto inceda amashishini ukuqhuba iziphumo zezinto eziphilayo kukubeka imali kwizinto ezingenagama, amagama afanelekileyo akhokelela kubathengi kwindawo yakho.
Amagama aphambili abalulekileyo -Ukuba unegama lenkampani elikhethekileyo, igama lemveliso, okanye kwanamagama omqeshwa wakho… amathuba okuba ubekwe kuloo magama ophando ngaphandle kokuzama umzamo owenzayo kwindawo yakho. Kungcono ndibeke isikhundla Martech Zone… Ligama elikhethekileyo lendawo yam ekudala ikho ngaphezulu kweminyaka elishumi. Njengoko uhlalutya uluhlu lwakho, amagama aphambili anophawu ngokuchasene namagama aphambili angenawo uphawu kufuneka ahlalutywe ngokwahlukeneyo.
Ukuguqula amagama aphambili Ayizizo zonke izinto ezinamagama aphambili angenalo uphawu, nokuba kunjalo. Ngelixa indawo yakho inokuthi ibekwe kumakhulu emigaqo, ukuba ayiziziphumo zendlela efanelekileyo yokuzibandakanya nophawu lwakho, kutheni uzikhathaza? Sithathe uxanduva lwe-SEO kubathengi abaliqela apho sinciphise kakhulu ukugcwala kwabo ngelixa sisonyusa uguquko lwabo kuba sigxile kwiimveliso kunye neenkonzo ezibonelelwa yinkampani!
Amagama aphambili afanelekileyo Isicwangciso esiphambili ekuphuhliseni i- ilayibrari yomxholo ibonelela ngexabiso kubakhenkethi bakho. Ngelixa zonke iindwendwe zinokuthi zijike zibe ngumthengi, ukuba lelona phepha libanzi nelincedayo kwisihloko kunokwakha igama lophawu lwakho kunye nokwazisa kwi-intanethi.
Sinomthengi omtsha otyale amashumi amawaka kwindawo kunye nomxholo kunyaka ophelileyo apho babekwa khona kumakhulu amagama ophando, kwaye ALUKHO uguquko kwisiza. Uninzi lomxholo alujoliswanga nakwiinkonzo zabo ezithile… babekwa ngokwemiqathango yeenkonzo abangakhange bazinike zona. Enjani yona inkcitho eyenziwayo! Siwususile lo mxholo kuba awuloncedo kubaphulaphuli abazama ukufikelela kubo.
Iziphumo? Amagama aphambili asezantsi abekwe… ngokubaluleka Nyusa kutyelelo oluchanekileyo lwezinto eziphilayo:
Iindlela zokubeka iliso zibalulekile kuKwenza kokuSebenza koMzimba
Njengoko indawo yakho ihamba kulwandle lwewebhu, kuyakubakho amahla ndinyuka rhoqo ngenyanga. Andizange ndigxile kwizinga elikhawulezileyo kunye nokugcwala kwabaxumi bam, ndiyabatyhalela ukuba bajonge idatha ngokuhamba kwexesha.
Ukubalwa kwamagama aphambili ngokuBeka ixesha elingaphezulu kwexesha Ukunyusa inqanaba lephepha kufuna ixesha kunye namandla. Njengoko ulungiselela kwaye uphucula umxholo wephepha lakho, nyusa iphepha, kwaye abantu babelana ngephepha lakho, inqanaba lakho liya kunyuka. Ngelixa iindawo eziphezulu ezi-3 ezikwiphepha 1 zibalulekile, loo maphepha anokuba aqala ukubuyela kwiphepha le-10. Ndifuna ukuqinisekisa ukuba onke amaphepha esiza abhalwe ngokufanelekileyo kwaye uluhlu lwam ngokubanzi luyaqhubeka nokukhula. Oko kuthetha ukuba umsebenzi esiwenzayo namhlanje usenokungahlawuli nakwizikhokelo kunye nokuguqula iinyanga… kodwa singabonisa ngokubonakalayo abathengi bethu ukuba sibahambisa kwicala elilungileyo. Qiniseka ukuba uzahlulahlula ezi ziphumo kwiimpawu ezinophawu kunye namagama angafanelekanga njengoko kuchaziwe apha ngasentla.
Inani labakhenkethi lenyanga kwiNyanga Ukuthatha ingqalelo kumaxesha onyaka kwimigaqo yokukhangela enxulumene neshishini lakho, ufuna ukujonga inani leendwendwe ezifunyanwa yindawo yakho kwiinjini zokukhangela (ezintsha nezibuya). Ukuba iindlela zokukhangela zihambelana nenyanga ngaphezulu kwenyanga, uya kufuna ukubona ukwanda kwenani labakhenkethi. Ukuba iindlela zokukhangela zitshintshile, uya kufuna ukuhlalutya ukuba uyakhula naxa kukhangelwe. Ukuba inani lakho leendwendwe licaba, umzekelo, kodwa iindlela zokukhangela ziphantsi kwamagama aphambili achaphazelekayo… uyenza ngcono!
Inani labakhenkethi abaPhilayo abaNyanga ngenyanga Ukuthatha ingqalelo kumaxesha onyaka kwimigaqo yokukhangela enxulumene neshishini lakho, uya kufuna kwakhona ukujonga inani leendwendwe ezifunyanwa yindawo yakho kwiinjini zokukhangela (ezintsha nezibuya) xa kuthelekiswa nonyaka ongaphambili. Ixesha lokuchaphazeleka linempembelelo kuninzi lwamashishini, ke ukuhlalutya inani labakhenkethi inyanga nenyanga xa kuthelekiswa nexesha elidlulileyo kuyindlela entle yokubona ukuba uyaphucula okanye ufuna ukumba ukuze ubone ukuba zeziphi iimfuno ezilungiselelwe.
Inani leenguqulelo ezivela kwi-Organic Traffic -Ukuba iarhente yakho yomcebisi ayibopheleli ukugcwala kwezithuthi kunye neendlela ezikhoyo kwiziphumo zeshishini, bayasilela kuwe. Oko akuthethi ukuba kulula ukuyenza… ayisiyiyo. Uhambo lwabathengi lwabathengi kunye namashishini aluhlambulukanga yokuthengisa njengoko singathanda ukucinga. Ukuba asikwazi ukubopha inombolo yefowuni okanye isicelo sewebhu kumthombo okhokelayo, sityhala abathengi bethu nzima ukwakha iinkqubo zokusebenza ezisemgangathweni ezibhala loo mthombo. Sinentambo yamazinyo, umzekelo, ebuza kubo bonke abathengi abatsha ukuba beve njani malunga nabo… uninzi lwabo ngoku lusitsho kuGoogle. Ngelixa oko kungohluli phakathi kwepakethi yemephu okanye i-SERP, siyazi ukuba iinzame esizifaka kuzo zombini ziyahlawula.
Ukujolisa kuguquko kuyanceda ukuba Lungiselela utshintsho! Sityhala abathengi bethu ngakumbi nangakumbi ukuze sidibanise incoko ephilayo, ucofe-umnxeba, iifom ezilula, kunye nezibonelelo zokunceda ukonyusa amaxabiso okuguqula. Kukuphi ukusetyenziswa kokuphakama okuphezulu kunye nokukhula kwetrafikhi yakho yendalo ukuba ayiqhubeki nokukhokelela ngakumbi kunye nokuguqula?!
Kwaye ukuba awunakho ukuguqula undwendwe olwenziweyo lube ngumthengi ngoku, kuya kufuneka uphinde usebenzise iindlela zokukhulisa ezinokubanceda bahambe uhambo lwabathengi ukuze babe banye. Siyazithanda iileta zeendaba, imikhankaso yedriphu, kwaye sinikezela ngokubhalisela ukuhenda iindwendwe ezintsha ukuba zibuye.
Iingxelo ze-SEO eziqhelekileyo aziyi kuXela lonke ibali
Ndiyakunyaniseka ukuba andisebenzisi naliphi na iqonga elingentla ukuvelisa naziphi na iingxelo ezisemgangathweni. Akukho mashishini mabini ayafana kwaye ndifuna ukuhoya ngakumbi apho sinokuthi senze khona kwaye sahlule isicwangciso sethu kunokulinganisa iindawo ezikhuphisanayo. Ukuba uyinkampani ye-hyperlocal, umzekelo, ukubeka esweni ukukhula kwendlela yokukhangela kwilizwe jikelele akunakunceda, akunjalo? Ukuba uyinkampani entsha engenagunya, ngekhe uzithelekise neesayithi ezifumana iziphumo eziphezulu zokukhangela. Okanye nokuba ulishishini elincinci elinohlahlo-lwabiwo mali olulinganiselweyo, ukuqhuba ingxelo yokuba inkampani enohlahlo-lwabiwo mali lwezigidi zeedola ayibonakali.
Idatha yomthengi ngamnye ifuna ukucocwa, ukwahlulwa, kwaye kugxilwe kubani ekujoliswe kubo kunye nabathengi ukuze ukwazi ukuphucula indawo yabo ngokuhamba kwexesha. Iarhente yakho okanye umcebisi kufuneka aliqonde ishishini lakho, ukuba uthengisela bani, yintoni abahluleli bakho, kwaye emva koko uguqulele loo nto kwiideshibhodi kunye neemetriki ezibalulekile!
Ukubhengezwa: Ndililungu le Semrush kwaye ndisebenzisa ikhonkco lokudibana kweli nqaku.
tags: amagama anamagama aphambiliamagama aguquliweyo aguqulweyoi-google analyticsIshishini kugoogleisikhundla segama elingundoqoUhlobo lwegama elingundoqoUluhlu lwamagama aphambiliamagamaamagama aphambili angenagamaUguquko lwezinto eziphilayoukugcwala kwezinto eziphilayoiinguqu zezinto eziphilayoiindwendwe eziphilayoamagama aphambili afanelekileyoenjini yokukhangela nounamagama ophandosemrushSEOukusebenzaiingxelo ze-seozixhoboyoutubeUhlalutyo lwejelo le-YouTubeUkukhangela ku-YouTube